Igbe nbinye aha China nke ụgha mkpọchi nku anya N'ogbe 25mm 100% mink nku anya ụlọ ọrụ na ndị na -emepụta | Weiti
Aha nkeonwe ụgha igbe mkpọchi nku anya N'ogbe 25mm 100% nku anya mink
1, 25mm ogologo mink fur lashes
2, curl zuru oke dabara na lashes nke gị
3, Ọ dị mfe ma dịkwa mma itinye
4, akara onwe nkeonwe
LASHES ndị a ma ama
The luster nke Kalocils lashes:
Agba ahụ na-enwu gbaa, dị larịị, ọ bụghị nke na-agwụ ike, nke bụ njiri mara nku anya ụgha dị elu.
Ịdị nro na ekweghị ekwe:
Ihe siri ike ga -etinye nnukwu nrụgide na nkuchi anya, na mgbe o yichara ya, ọ dị ka adịgboroja na nke na -ekwekọghị n'okike. Ọ bụrụ na nku anya ụgha dị oke nro, ha anaghị akwụ ọtọ nke ọma, na curl ga -adị ala. Nke kacha adabara bụ na ọ dị nro ma sie ike karịa ezigbo nku anya gị.
Curl zuru oke:
Ezigbo nku anya ụgha ga -agbanwerịrị, dị ka usoro nku anya nke nku anya dị elu. Nku anya ụgha kwụ ọtọ ga -esi ike mgbe ị na -eyi, ọ gaghịkwa ama mma.
Ngwa na ojiji:
Nku anya ụgha dị mkpa iji nweta ịma mma. Ma ọ bụ etemeete kwa ụbọchị ma ọ bụ isonye na nnọkọ ịgba egwu dị iche iche, nku anya dị mma ga -adọta mmasị ndị mmadụ ma mee onwe gị obi ike.
Enwere ike ịnye ụdị ntutu anya dị iche iche n'ọtụtụ buru ibu site na ngwaahịa ma na -akwado ịhazi ya, ka ị nwee ike nweta nku anya ụgha kachasị amasị gị n'oge ọ bụla. Dị ka onye na -emepụta ntutu anya ụgha, ọ na -abụ ebumnuche anyị mgbe niile ịzụlite ụdị ntutu anya na -ewu ewu ma na -ewu ewu.
Enwere ike ịhazi igbe nkwakọ ntutu ụgha dị iche iche, yana ị nwere ike ịhazi akara nkeonwe gị. Naanị ihe ị ga -eme bụ izitere anyị ma ọ bụ gwa anyị echiche gị maka akara ngosi ịchọrọ. Ndị otu nhazi nka anyị ga -enye gị ndụmọdụ kacha mma. Anyị na -enye ọrụ akara ngosi n'efu na ọrụ imewe nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ foto ngwaahịa, foto anyị nwere ike ime anyị.
Otu esi elekọta
Chekwaa lashes gị n'ime igbe nchekwa ha rutere ka ọ dị ọcha, kpọọ nkụ ma chebe ya ka ọ ghara imerụ ahụ.
Ọ bụrụ na nhịahụ gị etolitere na ha, enwetaghị ha mmiri, nke a ga -emebi ha. Iji kpochapụ nrụpụta ọ bụla, jiri mascara dị nro hichaa lashes gị. Ị nwekwara ike jiri nlezianya wepu gluu foduru na eriri nke adịghị mma na tweezers. Biko ekwekwala ka lashes gị nwee mmiri.
Mgbe a na-elekọta lashes gị nke ọma, a na-emegharịgharị ya ugboro 20-30
NDỤMỌDỤ: Iji mee ka ogologo ndụ gị dịkwuo ogologo ma debe ụdị ịdọ aka gị n'ihu, etinyela mascara ozugbo na ha. Kama nke ahụ, buru ụzọ tinye mascara na lashes anụ ahụ gị, hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ, wee tinye lashes gị.
Nke gara aga: Hazie Label Nkeonwe Otu Mgbakwunye Anya ntutu ntutu
Osote: Igbe igbe ahaziri onwe ya nke ukwuu 25mm nku anya mink
25mm Lashes warara
3d nku anya ụgha
Nku anya ụgha na -agara were were
N'ogbe 100% Real Mink 25mm 5D ntutu anya Indivi ...
Anya anya, Mgbatị ntutu anya, egbugbere ọnụ, mink lashes, Ndị na -ere ntutu anya, eyeliner,